Howl-Galo Amni Sugid ah oo ka socda Gaalkacyo – Radio Daljir
Oktoobar 13, 2015 9:29 b 0
Talaado, Oktoobar 13, 2015 (Daljir) —Ciidamada Amaanka Puntland ayaa xalay howlgalo ay ka sameeyeen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxay kusoo qab qabteen dhalinyaro badan oo gaaraysa ilaa boqol kuwaas oo looga shakiyey amaandaro.
Dadka ciidamadu soo qabteen ayaa dhamaantood laga soo qab qabtay xaafada Gaalkacyo ‘waxaana la geeyey Saldhiga dhexe,iyago dadkan baaritaan lagu wado.
Waxayna sheegeen Saraakiisha Booliiska ee gobolka Mudug in dadkan lasoo qab qabtay lakala saari doono’ qofkii dambi lagu waayo ayey sheegeen in lasii dayn dono’halka kii lagu helana uu ciqaab mari doono.
Howlgalada ciidamadu ka sameeyeen magaalada Gaalkacyo ayaa kusoo aaday xili habeenadan ay magaalada ka jiren dhalinyaro gaysanaysay falal amaandaro’ iyagoo furanayey Mobilada ‘islamarkaana dad ka qaadanayey waxyaabaha ay wataan.
Dowladda Puntland ayaana wada qorshe lagu xoojinayo Amaanka Gaalkacyo’sidoo kalana lagu hagaajinayo bilicda magaalada ‘waxana masuuliyiinta dowladda badankood kusugan yihiin Gaalkacyo.